'La Casa de Papel 5' - Ihe ịga nke ọma Netflix na -abịa na njedebe | Bezzia
'La Casa de Papel 5': Ihe ịga nke ọma nke Netflix
Susana godoy | 07/09/2021 14:00 | Akụkọ
Nkeji nkeji nkeji nke 'Ụlọ Akwụkwọ 5'. Oge ọhụrụ nke ekewara abụọ. Nke a na -adịkarị mgbe usoro a na -erute nsonaazụ ikpeazụ ya dị ka ọ dị. Mana ka ọ dị ugbu a, Netflix abụrụla ọzọ nhọrọ nhọrọ ekele maka ihe ịga nke ọma nke usoro dị ka nke a.
Agbanyeghị na anyị maara nke ọma, ọ bụghị n'ime ya mana anyị hụrụ ya na nke mbụ na Antena 3. Mana ọ bụ eziokwu na ịrị n'elu ikpo okwu mere ka nde kwuru nde mmadụ nwee ike nwalee ya wee bụrụ nke a. ihe dị n'ime na n'èzí oke ala anyị nke ọ bụ n'ezie. Ị hụla mbụ isi ise mbụ?
1 'La Casa de Papel 5' ekewara ụzọ abụọ
2 Oge ọhụrụ nke La Casa de Papel
3 A ga -enwe ọdịnihu La Casa de Papel?
'La Casa de Papel 5' ekewara ụzọ abụọ
Njem a adịla ogologo, ya na ọtụtụ ndị na -eso ya na oge ụfọdụ ọ na -ewe iwe, dịka ha na -adị. Mana anyị rutere n'oge nke ise nke usoro nke yiri ka ọ nwere naanị otu. Dịka anyị kwurula, ndị na -akwado ya na -acha uhie uhie na nkpuchi Dalí abụrụla ndị ama ama n'ime na n'èzí obodo anyị. Mana ọ bụ eziokwu na akụkọ ọma ọbụla ga -akwụsịrịrị ka anyị siri mara. Agbanyeghị na ọ na -ewute anyị, ọ bụ eziokwu na ha kwesịrị njedebe n'ụdị. N'ihi ya Na Septemba 3, ewepụtara akụkụ ise mbụ nke oge 5 na nke ise ga -abata na Netflix na Disemba 5. Ee, afọ a ga -akwụsị usoro a.
Oge ọhụrụ nke La Casa de Papel
Anyị agaghịkwa eme ndị na -emebi ihe n'ihi na anyị amatala ihe na -eme, yabụ na anyị ga -ekwu na mgbe ihe omume ikpeazụ nke oge nke anọ gasịrị, anyị chọrọ nke ise ozugbo enwere ike. Ọ bụ eziokwu na n'oge ahụ enwere ọtụtụ echiche gbasara ma nke anọ ọ ga -abụ njedebe. Mana Na ịhapụ ọtụtụ okpokolo agba n'igwe nwere ike mee ka anyị mata na nke ise ga -abịa wee rute.
Mana ọ na -abịa na ebumnuche abụọ yana ọ dị ka Álex Pina chọrọ itinye ihe ọzọ nke ndị na -ege ntị atụghị anya ya. N'ihi na agbanyeghị na e kewara ya ụzọ abụọ, ọ bụ eziokwu na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na edozighị atụmatụ ya, a ga -eme ya na akụkụ nke mbụ. Na mgbakwunye, mgbe ewepụtara isi iri n'otu oge, ọha amaralarị ma ọ bụ doo anya gbasara ebe amaghị ihe ga -amalite idozi ya. Ọ na -kwuru na Akụkụ nke abụọ nke 'La Casa de Papel 5' na -ebutekarị mmetụta uche nke agwa ọ bụla ma si otu a nwee ike jikọọ ya na nke ọma.
A ga -enwe ọdịnihu La Casa de Papel?
N'oge a, ndị egwu niile na -achọghị ka usoro a kwụsị, na -amalite ịtụle nhọrọ ọhụrụ. Enweela okwu na ikekwe ụfọdụ agwa ga -eweghara ma enwere ike nwee usoro ọhụrụ dabere na ya ma ọ bụ ikekwe, ọtụtụ afọ ka e mesịrị, laghachi n'isi mmalite dịka o mere na ọtụtụ aha ndị ọzọ anyị marala. Maka oge, anyị ga -edozi maka nkeji iri, nke dịka anyị na -ekwu na e kewara ya ụzọ abụọ.
Oge a enweela ndekọ dị mgbagwoju anya, n'ihi nsogbu Coronavirus yana kwa n'ihi na isi nke ọ bụla dị otu awa, nke pụtara na agbatịkwuru ya ntakịrị. N'ime ọnọdụ ya, anyị nwere Denmark, yana Spain na Portugal. Ọ bụ otu n'ime oge kacha atọ ụtọ n'ụzọ ọ bụla. N'ihi na ọ bụ maka itinye otu egwu na ọbụlagodi Prọfesọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ njedebe. Na mgbakwunye na ịkụ nzọ na mkpụrụedemede ọhụụ na mmechi nke na -achọ ịbụ mmetụ aka. Ha ji n'aka!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Akụkọ » 'La Casa de Papel 5': Ihe ịga nke ọma nke Netflix
Otu esi enweta ahụ ike mana na -enweghị mkpa ibu
Ọdịiche dị n'etiti ụbọchị ngafe na nke kacha mma tupu ụbọchị